Europa Universalis IV: Rule Britannia yakaziviswa! | Linux Vakapindwa muropa
Europa Universalis IV: Rule Britannia yakaziviswa!
Zvirokwazvo iwe unotoziva iwo mutambo wevhidhiyo weEuropa Universalis IV, zano revhidhiyo mutambo watakataura nezvazvo muLxA sezvo iine rutsigiro rweGNU / Linux. Zvakanaka, ikozvino vagadziri vayo vari kugadzirira rongedza idzva, kuwedzerwa kutsva kwevatambi vemitambo yemavhidhiyo kunakidzwa nezviri mukati mune ramangwana nekumwe kugadzirisa Europa Universalis IV: Ronga Britannia. Unogona kuona tirera nyowani yakaburitswa nevagadziri vayo mumusoro wenyaya ino uye uwane pfungwa yezvakatimirira ...
Saka kune avo vanga vasati vaziva zita racho kana kune avo vasina kumbozama zvakadaro, inguva yakanaka yekuwana iro basa rapfuura uye kubata risati raonekwa. chii chitsva muMutemo Britannia. Anenge makore mashanu mushure mekuvhurwa kweEuropa Universalis IV, basa rinoramba richivandudza nekunatsiridza mutambo. Iyo yapfuura DLC yaive Cradle yeKubudirira iyo yaitove nenhau dzinonakidza, muchokwadi yakanga iri imwe yezvakanyanya kuwedzerwa kuburitswa kusvika parinhasi. Nekudaro, izvo zvakafanana hazvigone kutarisirwa kubva kuRule Britannia, chinova chinhu chidiki uye chakanyanya kongiri.
Iko kutarisisa kwepakeji nyowani iyi inotarisa zvakanyanya kuBritish IslesNaizvozvo, vatambi vanozove nezvakawanda zvirimo uye nhengo dzenyika dzichatovepo mukuwedzera uku izvozvi. Parizvino mazhinji eanoshanda kana hunhu hwaachazopa hazvizivikanwe, asi chimwe chinhu chinozivikanwa zviri pamutemo senzira nyowani inotorwa nekutengeserana, kuchinjana ruzivo pamwe nevatsigiri, zvikamu zvitsva zvemauto nenhengo dzenyika nyowani dzeBritish. sevamiririri veIrish, veCornish, nezvimwe.
Zvirokwazvo tichava nazvo mishini mitsva yakasarudzika kuEngland, Escodia, neIreland. Padanho rehunyanzvi, shanduko yeindasitiri yasvikawo mumutambo wevhidhiyo, iine kuwanda kwakawanda kwekugadzirwa kukuru, hupfumi, kana kugadzirwa kwemarasha. Uye iyo nhau haisi kungosvika chete nenyika, zvikepe zvengarava zvichave zvakare nezvimwe tweaks sezvanga zvichizivikanwa. Kufanana nekunyudzwa kwekutenda kutsva kwechiPurotesitendi senge Anglicanism. Pasina kukanganwa madingindira emimhanzi ayo akamboshandawo nevanyori ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Europa Universalis IV: Rule Britannia yakaziviswa!
Maitiro ekuziva kana pasuru yakaiswa kana kwete muLinux
Isa iyo Nuvola Player inoyerera mimhanzi inoridza paLinux